EXCLUSIVE: Sara Ali Khan Gets Candid Ahead Of Her Second Release, ‘Simmba’ – BRT NEWS
EXCLUSIVE: Sara Ali Khan Gets Candid Ahead Of Her Second Release, ‘Simmba’
फिल्म पहिलो पटक एक जटिल घटना हो। कहिलेकाहीँ यसलाई तुरुन्त रोशन जस्ता एक सनसनीमा डुब्नेन्टले बिस्तृत गर्छ। अन्य समय, अभिनेता को क्रेज र करिश्मा को कार्तिक एरीन वा सम्भवतः एक आयुषमान खुराना जस्तै चलचित्र चलने को लागी केहि वर्ष लाग्छ। तर सारा अली खानले आफ्नो पहिलो साता साबित गरेको छ कि त्यो यहाँ बस्न आएको छ। उनको बोल्दै, कसैले मान्दछ कि केदारनाथमा उनको चरित्र उनको आफ्नै व्यक्तित्वको दर्जा झल्कन्छ। त्यो उच्च उत्साहित हुन्थ्यो। उनीहरूको हृदयको इच्छा के हो भन्ने डरलाग्दो छैन। यसैले सबै आलोचकहरु एकजुट भए उनको एक औंठी माथि कह दिए सारा कुनै अन्य जस्तै बिल फिट बस्छ!
के बक्स office वरिपरि अनिश्चितता तपाईं लाई डराउँछ? विशेष गरी जब ठूलो नामहरू उनीहरूका चलचित्रहरू सुरक्षित गर्न सक्षम छैनन्?
मलाई लाग्छ कि म त्यस्ता भयको लागि धेरै नयाँ हुँ। यस समयमा मेरो मात्र डर मेरो सय प्रतिशत मेरो खेल खेल्ने पात्रलाई प्रदान गर्न सक्षम छैन। चाहे सिम्म्बा वा केदानाथ हो कि म सबैलाई यो गर्न सकिन। बक्स अफिसमा के हुन्छ भने केहि चीज हो जुन म नियन्त्रण गर्न सक्दीन , त्यसैले म चीजहरूको बारेमा जोरजस्ती गर्छु जुन मेरो हातमा छैन।
एक सह-ताराको रूपमा रणवीरको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ र तपाईका फेसबुक छनौटमा के के छ? के तपाईं कहिल्यै जस्तो साहसी हुन सक्नुहुन्छ?
रणवीर को बारे मा बिल्कुल म सहमत छु कि ‘कोइ आफैले कार्त हो र त्यो पुरा ईमानदारी र दोष संग गर्छ’। र कामको दृष्टिकोणबाट, मलाई लाग््छ कि उहाँ कहिल्यै भेट्नुभएका सबैभन्दा प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। सेट मा उनको ऊर्जा यति धेरै संवेदनशील छ कि तपाईं आफ्नो पूर्णतम दिन दिन को लागी बर्दाश्त गर्न सक्दैन। त्यो एकमात्र विकल्प हो जसले तपाईंलाई सह सहको रूपमा दिन्छ। एक मानव को रूप मा, त्यो धेरै विनम्र र इमानदार छ कि तपाईं उनलाई धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ । र जहाँसम्म उनको फैशनेबल चिन्तित छ, मलाई लाग्छ कि उसलाई कुनै पनि तरिकाले उसले रोक्न सक्छ।
जो सिम्बाबा भन्छन् डबबङ जस्तो – के तपाई तिनीहरूलाई भन्न चाहानुहुन्छ?
म भन्न चाहन्छु आऊँ र यसलाई मेरो लागि हेर्छु। त्यहाँ कुनै समानताहरू छैनन् र यदि तपाइँ भेट्टाउनुभयो भने फेरि जानुहोस् र फेरि हेर्नुहोस्, तपाईंले सम्भवतः पूर्ण ध्यानको साथ हेर्नु भएको छैन।
तपाईंको आमा र बुबा ठूलो मात्रामा काम गरिरहेका थिए जब सेटबाट कुनै मेमोरी छ?
म सेट गर्न गएको छु, तर केवल आमाको श्रृङ्खला र मेरो बुबाको सह-अभिनेताको श्रृङ्खला प्ले गर्न मात्र। म त्यो साथ इमेज गर्न प्रयोग गरें। पहिलो पटक मैले हेरे कि केदारनाथको थियो र मैले सोचेँ कि तपाईंले अन्ततः सिनेमाहरूमा हेर्नु भएको फरक फरक छ।
तपाईले कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन्छ जब मानिसहरूले तपाईंलाई अर्को ताराको रूपमा लिने मौका पाउनुहुन्छ ?
मेरो उत्थान पूर्णतया धेरै फरक भएको छ। मेरो आमाबाबुले तपाईलाई थाहा भए जस्तो एकै साथ बाँच्न नसक्ने र जहाँसम्म म सम्झन्छु म मेरो आमासँग बस्न सक्दिन। मेरी आमा, मेरो जन्म पछि, धेरै मुख्यधारा चलचित्रहरू गरिरहेको छैन। मेरो बुबा, अर्कोतर्फ, राजनीति, पढाइ, इतिहास र कलाको लागि एक स्टिकर हो। उहाँका चासोहरू फरक कुराहरूको लागि इच्छुक छन्। यसैले म कहिल्यै अस्वीकार गर्दिन कि म एक फिलिम परिवार बाट आउँछु तर म वस्तु हुनेछ यदि एक भन्छन् कि मेरो उत्थान त्यहि तरिका मा गरियो।
चलचित्रहरू बारे जान्दछन् र वास्तवमा सेटहरूमा शूटिङ धेरै फरक कुराहरू छन्। एक कुरा के हो कि तपाईं आश्चर्य द्वारा पकडिएको छ वा शायद यो तपाईंको अपेक्षाहरु देखि फरक थियो?
यो आश्चर्यजनक थियो। त्यसैले केदारनाथमा पहिलो कुरा मैले सम्झना सुशंतसँग कुरा गरें र सोधें ‘हामी किन त्यहि दृश्य फेरि दोहोर्याउँछौं’। र उहाँले मलाई प्रबुद्ध गर्नुभयो कि यो कसरी दृश्य हुन्छ भनेर गोली मारिएको छ कि तपाईले यसलाई विभिन्न कोणबाट गोली मार्नु पर्छ र यो कसरी सम्पूर्ण चलचित्र बनाइन्छ। त्यसैले मलाई ती आधारभूत कुराहरू पनि थाहा थिएन।
What are the things add Masala! in your life?
चलचित्रहरू मेरो जीवन masaladar छन् र म आशिष्मा छु कि म Masala फिर्ता गर्न सक्दिन! दर्शकहरूलाई। जीवन धेरै सर्कल आउँदैछ यो धेरै धेरै हो; जब तपाइँ चलचित्रहरू हेर्नुभयो र यसको हरेक बिट माया गर्नुहुन्छ र अब तपाईं एक बनाउने को भाग हुनुहुन्छ। यसैले हाँ, फिलिमहरु लाई मेरी जिंदगी मालालय बनाउन को लागी बनाइयो!
एक सल्लाह तपाईं अन्य डिब्युट्युटहरूलाई यो ठूलो बनाउन चाहनुहुन्छ जो दिनुहुन्छ?
म धेरै जवान छु कि कुनै सल्लाह दिनुहोस तर हाँ, म एक अभिनेता बनने को निर्णय लिया जब एक कुरा जो दोश्रो संग साझा गरिएको थियो दोहोर्या सकते हो। यदि तपाईं कडा मेहनत गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं आफ्नो शिल्पमा समर्पित हुनुहुन्छ र यदि तपाईं आफ्नो काममा ईमानदार हुनुहुन्छ भने, तपाईं चिसो बन्न बाध्य हुनुहुन्छ। र यो फिलिमहरूका लागि मात्र होइन तर कुनै अन्य व्यवसायको लागि पनि होईन।
Previous Bollywood actresses’ no make-up selfies
Next Sonam Kapoor को लागि 2018 को यो मोमेंट्स रहयो खास, शेयर गर्यो VIDEO